Political Page ပုလဲသွယ်: Myanmar Red Cross Society posting on Facebook and Comments
Myanmar Red Cross Society posting on Facebook and Comments
ကျောင်းကြက်ခြေနီအသင်းများ စစ်ရေးပြနှင့် ရှေးဦးပြုစုခြင်း စွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲ မြိတ်မြို့တွင် ကျင်းပ
မြိတ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်
Tint Swe နဝတ၊ နအဖ လက်ထက်တွေမှ ကြက်ခြေနီ၊ နဲ့ မီးသတ်ဟာ နိုင်ငံရေးအရ ဆန့်ကျင်သူတွေကို နှိမ်နင်းဘို့ရာ လက်ကိုင်ဒုတ်အဖြစ် အသုံးချခံခဲရသလို အခုကောရှိပါသေးလား။
ညို မိုးတိမ် ၄၁ ကြိမ်တောင် ရှိပြီဆိုတော့ ချီးကျူးစရာပဲ။ မြိတ်ကြက်ခြေနီရဲ့ အစဉ်အလာကောင်းကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါစေ။
ဇဗ္ဗူ မင်း အော် အမြင်တွေမပြောင်းသေးဘူးနော် ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီခေတ်တွေကို ဖြတ်ခဲ့ရတယ် ဒါပေမယ့် လက်ကိုင်တုတ်ဆိုတာကို အခုထိ နားမလည်သေးဘူး ကြက်ခြေနီဟာ ကိုယ်ပိုင် အက်ဥပဒေ နည်းဥပဒေတွေနဲ့ ကို့ ပညာရပ်နဲ့ အများပြည်သူကိုသာ အကျိုးပြုခဲ့ပါတယ် နိုင်ငံရေးမှာ ကြက်ခြေနီကြောင့်ဆိုတာ တစ်ခါမှ မရှိခဲ့ပါဘူး
1. On the other hand the regime tries to define and control civil society exclusively through government sponsored organisations like the Myanmar Women’s Affairs Federation, Myanmar Fire Brigade, Myanmar Red Cross Society, and so on, which are led by active and retired military officers and organises mass rallies, conducts military training, and undertakes social and community services. It is increasingly involved in policing measures and harassment of activists aided byamilitia group, Swan Ah Shin “Owners of Vigour” Both organisations took part in the crackdown of the demonstrators in the monk-led uprising in September 2007. http://www.asiantribune.com/news/2012/02/27/burmese-army-tatmadaw-anathema-democracy-union-0
၁။ တဖက်ကကြည့်လျှင် (စစ်) အုပ်စုသည် လူမှုအဖွဲ့အစည်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ကြိုးစားရာတွင် အစိုးရအမိန့်ကိုသာ သီးသီးသန့်သန့် နာခံကြရသည့် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်း၊ စသည့် လက်ရှိတာဝန်ထမ်းနေကြသော သို့မဟုတ် စစ်တပ်မှ အနားယူထားကြသော အရာရှိကြီးများက ဦးဆောင်သည့် အသင်းအင်းများကို လူထုအစည်းအဝေများကျင်းပရာတွက် မဖြစ်မနေ တက်ရောက်စေခြင်း၊ စစ်သင်တန်းများပေးခြင်း၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ (အလိုကျ) လုပ်ဆောင်စေသည်။ ထို့ပြင် စွမ်းအားရှင်အမည်ခံဖြင့် ပုလိပ်အလုပ်မျိုးများအတွက်လည်းကောင်း၊ ၂ဝဝ၇ သံဃာ့အရေးအခင်းတွင် ဆန္ဒပြသူများအား နှိမ်နင်းရာတွင်လည်းကောင်း အဆိုပါ အုပ်စု ၂ မျိုးလုံးအား အသုံးချခဲ့ပေသည်။
2. The repressive local government machinery of the Burmese state was responsible for ensuringareferendum result called for by the SPDC's generals and they left nothing to chance. The Village Peace and Development Council (VPDC), or Ya Ya Ka, and local military units were instructed to produce the right result by top military officials only concerned witharesult, notaprocess. Local officials, cadres from the USDA, the government-backed mass movement, representatives of the Auxiliary Fire Brigade and Myanmar Red Cross Society, and military and police personnel either forced people to vote, or collected name lists of household and small community members that were all then fraudulently cast as ``yes'' votes by the referendum officials. It's one of the fundamentals of the SPDC's repressive rule _ constructasystem where popular fear to defy the military is augmented through overlapping mobilisation of military, police and government-controlled social organisations to ensure obedience to the SPDC's dictates. http://www.hrw.org/news/2010/05/02/disastrous-taste-democracy
၂။ နဝတ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများက ဦးစီးကျင်းပခဲ့သော လူထုဆန္ဒခံယူပွဲတွင် မဖြစ်မနေ အနိုင်ရရှိစေရန်လုပ်ဆောင်ရာ၌ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖိနှိပ်သော ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ယန္တယားတွင် တာဝန်ရှိပေသည်။ (ရယက) များနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ စစ်တပ်တို့အား နည်းလမ်းကျ-မကျအတွက်မဟုတ်ဘဲ လိုချင်သည့်ရလဒ်ရရှိရေးသာ လုပ်ကြရန် အမိန့်ပေးထားသည်။ ဒေသဆိုင်ရာအရာရှိများ၊ ကြံခိုင်ရေးကေဒါများ၊ အစိုးရသြဇာခံအသင်းအပင်းများ၊ အရံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်း၊ စစ်တပ်နှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် လူထုအား အင်အားသုံး၍လည်းကောင်း၊ အိမ်ထောင်စု ဇယားများမှ နည်မည်များကောက်ယူ၍လည်းကောင်း၊ “ထောက်ခံ” ဆိုသည့်မဲဖြစ်စေအောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပေသည်။
3. In 1998, the Tatmadaw held its first joint military exercises of the navy, the air force and the army to introduce counteroffensive strategies to the existing people's war doctrine. During these exercises, the fire brigade, the Myanmar Red Cross and the Union Solidarity Development Association were mobilized. http://www.burmalibrary.org/show.php?cat=411&lo=t&sl=1
၃။ ၁၉၉၈ တွင် တပ်မတော်သည် ပဌမဆုံးအကြိမ် ကြည်းတပ်၊ ရေတပ် နှင့် လေတပ်ပူးပေါင်းသည့် “ပြည်သူ့စစ်” အယူအဆအရ စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွင် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ ကြက်ခြေနီအသင်းနှင့် ကြံခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင့်းတို့ကိုလည်း ပါဝင်စေခဲ့သည်။
4. Civilian forces such as police, fire brigade forces, and Red Cross members are trained as the underpinnings of the army. (Time for UN Intervention in Burma/Myanmar:National Council of the Union of Burma October 2003)
၄။ အရပ်သားအဖွဲ့အစည်းများ ဥပမာ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ က်ြကခြေနီအသင်းတိုးအား စစ်တပ်လက်အောက်ခံအဖြစ် သင်တန်းများ ပေးထားသည်။
5. In late 1998, the Myanmar Red Cross, the Auxiliary Fire Brigade, the Computer Entrepreneurs Association, the Rice Millers Association, Myanmar Chamber of Commerce and Industry, and the Myanmar War Veterans Organisation joined the USDA in denouncing Aung San Suu Kyi and the NLD. (MYANMAR: THE ROLE OF CIVIL SOCIETY ICG Asia Report N° 276December 2001)
၅။ ၁၉၉၈ နောက်ပိုင်းတွင် အရံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း၊ ကွန်ပြူတာအသင်း၊ ဆန်စက်ပိုင်ရှင်များအသင်း၊ မြန်မာ စက်မှုလက်မှုနှင့်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၊ စစ်ပြန်စစ်မှုထမ်းဟောင်းများအဖွဲ့တို့အား ကြံခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင့်နှင့်အတူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့အား ရှုတ်ချပွဲများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်စေခဲ့သည်။
6. Durable Dictatorship in the Presence of Emigration July, 2011 http://www.wise.xmu.edu.cn/labor2011/papers/Min%20Hein.pdf
7. Thin Rule of Lawor Un-Rule of Law in Myanmar? Nick Cheesman http://www.academia.edu/892302/Thin_Rule_of_Law_or_Un-Rule_of_Law_in_Myanmar
Posted by Dr. Tint Swe at 9:48 PM